Abakhiqizi bohlaka abaphansi - China Ifreyimu ephakanyisiwe yaphansi, Abahlinzeki
Ukulungiswa kombhoshongo we-12m wokuxhumana ngocingo
Imilenze emi-4 yocingo lombhoshongo i-4-Legged Angular Tower ingumbhoshongo ozisekelayo owenzelwe iphethini eyisisekelo esiyisikwele. Umbhoshongo wenzelwe imithwalo ephakathi nendawo esindayo futhi ngokuvamile ulungele amasayithi ayisisekelo, amasayithi omgogodla we-MW, noma izindawo zokuxhumana eziphakathi nendawo. Imikhiqizo esiyinikezayo Umkhiqizo wethu uhlanganisa umbhoshongo ophahleni ophahleni olude olungu-60m. Ngenkathi izinketho zezinhlobo zombhoshongo we-telecom zingaphezu kwemibhoshongo yolayini. Isibonelo, umbhoshongo we-monopole, umbhoshongo wensimbi we-tubular, umbhoshongo we-angle wensimbi, ukuphela njll.
Ukuhlolwa kombhoshongo we-12m wokuxhumana ngocingo
Ukulungiswa kombhoshongo wokuxhumana ngocingo olungu-12m Ukuze kuqinisekiswe ukusebenza okujwayelekile kohlelo lokuxhumana olungenantambo, i-antenna yezokuxhumana ngokuvamile ibekwa endaweni yokwandisa irediyo yokutholakala kwesiginali ye-antenna yezokuxhumana ukuze kuzuzwe umphumela wokuxhumana ofiselekayo. Ezakhiweni zokuhlala emadolobheni, ezakhiweni zehhovisi, nasezakhiweni zehhovisi ukwakha iziteshi zokuxhumana, ama-antenna wokuxhumana ngokuvamile asetshenziselwa ukukhuphula ukuphakama kwama-antenna, izingongolo ze-antenna noma ...
I-Rooftower 12m Ukuze kuqinisekiswe ukusebenza okujwayelekile kohlelo lokuxhumana olungenantambo, i-antenna yezokuxhumana ngokuvamile ibekwa endaweni ukuze kwandiswe irediyo yokutholakala kwesiginali ye-antenna yezokuxhumana ukuze kuzuzwe umphumela wokuxhumana oyifunayo. Ezakhiweni zokuhlala zasemadolobheni, ezakhiweni zehhovisi, nasezakhiweni zehhovisi ukwakha iziteshi zokuxhumana, ama-antenna wokuxhumana ngokuvamile asetshenziselwa ukukhulisa ukuphakama kwama-antenna, izingongolo ze-antenna noma imibhoshongo ye-antenna, ngakho-ke intuthwane ...